Yenza iikhredithi zakho ze-Star Wars kwi-smartphone yakho ye-Android ngamagama e-Star Words | Iindaba zeGajethi
Kule minyaka idlulileyo, sele kulisiko ukuba phakathi kuDisemba, amakhwenkwe akwaDisney akhuphe imovie entsha kwiStar Wars franchise. Ngesi sihlandlo, namhlanje ngoDisemba 15 ngumhla we Inkulumbuso ye-Star Wars: Isiqendu VIII: IJedi yokugqibela, isavenge sesibhozo sale saga ithandwayo ethi nyaka ngamnye ikwazi ukubetha zonke iirekhodi zangaphambili.
Iikhredithi ze-Star Wars zizinto zokunconywa kunye nokuxeliswa zizicelo ezininzi. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, okwangoku kwi-Android sinesicelo seNkwenkwezi yamagama, isicelo esivumela ukuba sikwenze yenza iikhredithi zethu ze-Star Wars ngombhalo esiwufunayo, njengoko sinokubona kumfanekiso ongentla.
Ngombulelo kwisicelo se-Star Words, sinokwenza izihloko zokuqala zeevidiyo zethu esizithandayo ngamanyathelo nje ambalwa kwaye sizongeze ngomhleli wevidiyo kwindalo yethu, ngokuthe ngqo kwi-smartphone yethu okanye ngqo kwikhompyuter yethu. Le app ifumaneka simahla kwaye andicingi ukuba izakuhlala ixesha elide xa iDisney isazi ngayo. Ngaphandle kokufumaneka simahla, Kuya kufuneka singene ebhokisini kwaye sihlawule i-1,69 euro, ukuba sifuna ukutshintsha aMagama eNkanyezi asenze esinye isicatshulwa.
Ngaphakathi kokukhetha ngokwezifiso, sinokongeza hayi nje isicatshulwa esifuna ukusibonisa, kodwa sinokongeza umculo ukuze xa sisenza ukurekhodwa kwevidiyo, endaweni yokurekhoda isandi esijikeleze imakrofoni ye-smartphone yethu, ingoma yomsindo esiyifunayo yongezwa, yiyo loo nto sigcina umsebenzi wokuhlela xa sihlanganisa ividiyo, ngakumbi ukuba unenjongo yokwenza ngokuthe ngqo kwi-smartphone yethu.
Nathi sinako ukwenjenjalo lungisa isantya apho sifuna ukuba umbhalo uvele khona, ubungakanani befonti, ubuninzi besicatshulwa, umthamo womculo, umfanekiso ongasemva, ukuqhelaniswa nevidiyo, kongeza ukuphela komnyama xa ividiyo iphela ... ubeke izimvo ngentla apha, kungenzeka ukuba esi sicelo siza kususwa kwiVenkile yeGoogle Play, kungekudala kunokuba kunjalo, ukuba ufuna ukukwazi ukuyisebenzisa, ungalibazisi ukuyikhuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Yenza iikhredithi zakho ze-Star Wars kwi-smartphone yakho ye-Android ngamagama e-Star
Isamsung isungule isithethi sayo esihlakaniphile kwisithuba sokuqala se2018